भोलि देशभर सार्वजनिक विदा – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भोलि देशभर सार्वजनिक विदा
भोलि देशभर सार्वजनिक विदा
काठमाडौं, सरकारले बुद्ध जयन्तिको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक विदा दिएको छ। २०७६ चैत ९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय र चैत १७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार वैशाख पूर्णिमा/चण्डी पूर्णिमा र बुद्ध जयन्तिका दिन बिहीबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सन्तोष सुवेदीले बुधबार सूचना निकालेर बिहीबार मुलुकभर सबैलाई लागू हुने गरी बिदा रहेको जानकारी गराएका छन्।
दिपा दिदी तपाईं छोरी भएर जन्मिनु नै गल्ती भयो- नायिका केकि अधिकारी
रविको हिरासतकै अडियो सार्वजनिक- यहाँ मलाई जे पनि गर्न सक्छन्
सावधान ! घर बाहिर निस्कनु अघि थाहा पाउनुहोस कोरोना जोखिम कम गर्न सरकारले जारी गरेको नयाँ नियम ! – अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस
आँचलले श्रीमानसँग मिलेर फिल्म बनाउँदै , नायकमा पल शाह ?
निःशुल्क वाइफाइ परियोजना लिएर नेपाल भित्रियो फेसबुक, काेसँग कसरि गर्दैछ सहकार्य ?